Shuruudaha iyo shuruudaha | Sandbalka Pebble Tours
SHARCIYADA GUUD & SHURUUDAHA
Dhammaan qiimaha waxay ku jiraan Rupee Hindiya.
GST 5% waxaa lagu dabaqi karaa wadarta biilka.
Martida waxaa laga codsanayaa inay gaaraan gaariga iyaga laftooda ka hor inta aan la isticmaalin. Waxaa sidoo kale laga codsanayaa in ay alaabadooda shakhsi ahaaneed ku hayaan xannaanadooda. Kuma lihin wax mas'uuliyad ah oo lumis ah.
Haddii ay tahay nooca baabuurka sida dalabaadka aan la heli karin sababo aan la filaynin, nooca noocaas oo kale ah waa in la siiyaa martida.
Aragtida aragga waa inay ahaataa mid gaaban oo kaliya waddooyinka baabuurta leh.
Darawalka laguma qasbi karo inuu ku wado xawaare ka sarreeya marka loo eego qawaaniinta Hindiya Gaadiidka Gaarka ah. Kuwa ugu badan waxaa laga codsanayaa inay iska ilaaliyaan safarka habeenkii ah.
Wixii ka wanaagsan ee marti-gelinta, Sandbirds Tours waxay diyaarinayaan inay bixiyaan Khidmadda Bixinta Bixinta / Dakhliga Bixinta iyo Khidadaha Bixinta Xuduudaha ee u dhexeeya Dhamaystirka kaas oo soo celin doona marti-qaadka si loogu wareejiyo soosaarista risiidhada xilalka waajibaadka ah.
Mas'uuliyadaha degaanka, Saacadaha Maalinta Cuntada ee Chauffeur waa in lagu soo dalacaa 22.00 Hrs ilaa 06.00 Hrs. Dhammaan lacagaha dheeraadka ah ee dheeraadka ah ee lagu bixinayo isaga lacag ahaan inta lagu jiro isticmaalka.
Intii aad wado waddooyinka Ghat, Cabbitaanka Dabeecadda waa la joojinayaa.
Si looga fogaado socodka socodka iyo xaaladaha kale ee aan la filayn oo keeni kara daahitaan, ogeysiis ku filan in la siiyo wareejinta madaarka / tareenka.
Xaashiyo Safar ah ayaa looga baahan yahay inay saxiixaan user si loo xaqiijiyo isticmaalka. Cabashooyinka soo socdaa ma ahan kuwo aan la aqbalin.
Martida waxaa laga codsanayaa inay qiimeeyaan tayadeena iyo waxqabadka iyo buuxinta foomka "Feedback" si ay u soo bandhigaan Shauffeur, Tani waxay naga caawineysaa inaan si fiican kuu adeegno.
Biilasha waxaa lagu soo saari doonaa Macmiilka / martida haddii aan si kale loogu qorin qoraal ahaan. Habka lacag bixinta waa in si cad loogu sheegaa wakhtiga ballansashada.
Biilasha waxaa loo soo bandhigi doonaa habka Fortnight. Sanduuqa hubka ayaa u oggolaanaya ugu badnaan maalmaha 15 laga bilaabo taariikhda helista Qodobka ku saabsan fulinta Heshiiska. Waqtiga kordhinta wakhtiga Credit Credit Culays ayaa laga codsan karaa qoraal ugu yaraan saacadaha 48 ee helitaanka biilka.
Qeybta kor ku xusan waxay ku xiran tahay xayeysiinta qiyaasta marka ay dhacdo in ay socoto qiimaha Shidaalka ama Govt. Qeybaha cashuurta.
Kor u qaadida gaadiidka ee Bhubaneswar waa gebi ahaanba go'aan ka gaarista Sandbirdaha Sand.
Lacagta waxaa lagu kala saari karaa lacag caddaan ah ama qof / mushahar bixiye / Check / DD / PO oo lagu soo bandhigay "Sandbalka Socdaalka Socdaalka 'n' Travels (I) Pvt Ltd."Lacagta ayaa sidoo kale lagu xallin karaa Credit Card / RTGS ama NEFT (Bixinta kaararka deynta ayaa lagu qaadi doonaa 3% dheeraad ah).
Heshiiska kaadhka amaahda, Kaarka Tirada iyo Taariikhda Dhamaystiraha waa in la soo diro ama la soo diraa xilliga dayactirka. Haddii ay suurtagal tahay helitaanka khilaafka, Client / Guest ayaa ballanqaadaya inuu lacag u helo.
Haddii lacala bixinayo RTGS / NEFT, Sandbiska Sandbalka waa in lagula taliyaa faahfaahinta.
Haddii ay dhacdo in lacag caddaan ah Rs.25000.- ama in ka badan, nuqul kaarka kartida ee Macaamiisha / martida la dhigo.
Dhammaan khilaafaadka waxay u hoggaansamaan xukunka sharciga ee Bhubaneswar oo keliya.